Fratelli Tutti (all brothers) (အနှစ်ချုပ်တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ) | Radio Veritas Asia
Fratelli Tutti (all brothers) (အနှစ်ချုပ်တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ )
Pope Francis က Oct ၄ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်လိုက်တ့ဲ စာချွန်တော် အသစ်ထဲက နိုင်ငံရေးန့ဲ ပက်သက်တ့ဲ အပိုင်း တစ်ခု အခုလို ရွေးကောက်ပွဲနီးလာတ့ဲ အချိန်မှာ အရမ်းကို အချိန်ကိုက်ဖြစ်နေတာကြောင့် ဝေငှလိုက်ရပါတယ်။ အားလုံးအဆုံးထိ ဖတ်ကြမယ်လို့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် မျှော်လင့်ပါတယ်။
All the students are strongly encouraged to read this.)
အချင်းချင်းကြား မေတ္တာတရား၊ လူမှုမိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်း
I appealed forarenewed appreciation of politics as “a lofty vocation and one of the highest forms of charity, in as much as it seeks the common good.”
နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်ခြင်းက အများကောင်းကျိူးအတွက် (လူမျိူးတစ်မျိူး နိုင်ငံတစ်ခုထဲအတွက်မဟုတိ) ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေသမျှ ၎င်းက မြင့်မြတ်တ့ဲခေါ်တော်မူခြင်းဖြစ်တယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားကို လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖေါ်ရှင်သန်ခြင်း အမြင့်ဆုံး အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တယ်။
နိုင်ငံရေး ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားရှိကြပါ။ မေတ္တာတရားကို ဖေါ်ဆောင်တ့ဲ နည်းလမ်း ၂ မျိူးရှိတယ်။ “Elicited love” and “Commanded love”
လတ်တလော အကူအညီလိုအပ်နေတ့ဲသူကို သူလိုနေတ့ဲ (ပိုက်ဆံ စားစရာ အဝတ်) ပေးလိုက်ခြင်းက ကိုယ့်ရ့ဲ မေတ္တာပါရမီအခံကနေ ထွက်လာတ့ဲ elicited love ဖြစ်တယ်။
အလားတူ အရေးကြီး မရှိမဖြစ်တ့ဲ ချစ်ခြင်းမေတ္တာက ကိုယ့်အိမ်နီးနားချင်းတစ်ယောက်က ဆင်းရဲ မနေစေဖို့ နိုင်ငံရ့ဲဖွ့ဲစည်းပုံ စည်းမျဉ်းတွေကို စနစ်တကျဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ခြင်းမှာ ပါဝင်ခြင်းဖြစ်တယ်။
ကိုယ့်ရှေ့မှာ တွေ့နေရတ့ဲ ဒုက္ခရောက်နေသူကို ကူညီခြင်းက ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြုအမူဖြစ်တယ်။ အလားတူပဲ အဲဒီလို ဒုက္ခမျိူးတွေကိုဖြစ်နေစေတ့ဲ လူမှုအခြေအနေတွေ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာအောင် လုပ်ခြင်းက ကိုယ်မသိ၊ တစ်ခါမျှ မမြင်ဖူးပေသိ၊ ထိုသူအပေါ်မှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြုအမူ လုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။
လမ်းဖြတ်ကူးဖို့ ခက်ခဲနေတ့ဲ အဘွားတစ်ယောက်ကို တစ်စုံတစ်ယောက်က ကူလိုက်ခြင်းက elicited love ဖြစ်သလို နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်က လူကူးတံတားဆောက်လိုက်ခြင်းကလဲ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြုအမူ commanded love ဖြစ်တယ်။ စားစရာ ငတ်နေတ့ဲသူကို စားစရာ ပေးခြင်းက ချသ်ခြင်းမေတ္တာ အပြုအမူဖြစ်သလို၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေရှိလာအောင် ဖန်တီးခြင်းက နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ရ့ဲ မြင့်မြတ်တ့ဲ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အပြုအမူဖြစ်ပါတယ်။
(ဆေးရုံန့ဲ မဲရုံ ဘယ်အရာက အရေးကြီးသလဲဆိုပြီး စောဒက တက်နေတာကို ပုပ်ရ့ဲစာချွန်တော် အရဖြေရင် ဆေးရုံက လတ်တလော ဖြေရှင်းရမ့ဲ ချစ်ခြင်း၊ မဲရုံက ကျန်းမာရေးစနစ်တွေ ဒီထက်ပိုကောင်းလာအောင် ဦးစားပေး မူဝါဒတွေန့ဲ ရေရှည်ဖြေရှင်းရမ့ဲ အရေးကြီးတ့ဲ ချစ်ခြင်းအပြုအမူဖြစ်တယ်)
(အရောင် မျိူးစုံန့ဲ ကွဲပြားနေချိန် စာချွန်တော်ထဲက ဒီအပိုင်းက ဘယ်လိုစိတ်ထားရမယ် ဆိုတာ ပြောနေပါတယ်။ ဆက်လက် သည်းခံဖတ်ပါ)
အစွန်းရောက်သည်းမခံနိုင်ခြင်းတွေက လူတစ်ယောက်န့ဲတစ်ယောက်အကြား၊ တစ်ဖွ့ဲန့ဲတစ်ဖွ့ဲအကြား၊ တစ်အုပ်စုန့ဲတစ်အုပ်စုအကြား ဆက်ဆံရေးတွေပျက်စီးလာနေစေတယ်။ ဒါကြောင့် ကြိုးစားကြရအောင်။ တစ်ခြားသူတွေကို လေးစားတတ်တ့ဲတန်ဖိုးကို ကိုယ်ကိုတိုင်လဲကျင့်ပါ၊ သူများတွေကိုလဲ သင်ပေးပါ။ ကိုယ်န့ဲမတူတ့ဲသူတွေကိုလဲ လက်ခံနိုင်တ့ဲမေတ္တာတရားမျိူးထားပါ။ သူ့ရ့ဲအိုင်ဒီယာတွေ၊ အယူအဆတွေ၊ အကျင့်တွေ၊ အပြစ်တွေကိုတောင်မှ ရှေ့တန်းမှာ မထားပဲ လူတစ်ယောက်တိုင်းစီမှာရှိတ့ဲ human dignity လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ဦးစားပေးတတ်အောင်ကျင့်ယူပါ။ မတူညီတ့ဲသူဆီက အသံတွေကိုကြားနိုင်အောင် နားထောင်ပါ။ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာတွေက သူ့အဖွဲ့ ငါ့အဖွ္ဲဆိုပြီး ပဋိပက္ခတွေဖြစ်စေတာမှန်တယ်။ သို့သော်လည်း အားလုံး တစ်ပုံစံတည်း တစ်မျိူးတည်းဖြစ်နေခြင်းက ဖိနိှပ်မှုရှိနေတာရ့ဲ သက်သေဖြစ်ပြီး လူ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပျက်စီးစေတယ်။
နိုင်ငံရေးသမားတွေမေးရမ့ဲ မေးခွန်းက How many voted me? မဲအရေအတွက် ဘယ်လောက်ရသလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ မေးရမ့ဲမေးခွန်းက ငါလုပ်နေတ့ဲ အလုပ်မှာ မေတ္တာတရား ဘယ်လောက်အထိ ထည့်လုပ်ခ့ဲသလဲ။
( စချွန်တော်အရ တိုက်တွန်းပါတယ်။ မဲပေးခွင့်ရှိသူတိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်စား ရေရှည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားလုပ်ငန်းများကို တစ်ကယ်လုပ်ဆောင်ပေးမ့ဲ သူကိုမဲပေးခြင်းဖြင့် commanded love ကိုဖေါ်ဆောင်ပေးပါ)